Wararka Maanta: Isniin, Jun 3 , 2013-Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya oo sheegay in Xukuumaddiisu aysan wax colaad ah u Qabin Dalka Kenya
Xasan Sheekh wuxuu sheegay in wararka ay baahinayaan warbaahinta aysan ahayn oo keliya kuwo si xun loo turjumay, balse ay yihiin kuwo lagu doonayo in la xumeeyo xiriirka u dhexeeya maamulllada Nairobi iyo Muqdisho.
“Waxaan aaminsanahay in xukuumadda Kenya ay naf iyo maal u hurtay sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya, taasna waa sharaf u ah dowladda iyo shacabka Kenya, dunidana way ogtahay taas,” ayuu yiri ku daray hadalkiisa.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa hadalkan sheegay kulan uu Sabtidii kula yeeshay dalka Jabaan madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya, William Ruto, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya uu u sheegay Ruto in xukuumaddiisu ay si dhow ugala shaqeyn doonto dolwadda Kenya sidii dib loogu soo celin lahaa ku dhawaad laba milyan oo qoxootig Soomaaliyeed oo dalkaas ku noolaa 20-kii sano ee lasoo dhaafay.
Sidoo kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in amaanka Kismaayo oo laga saaray Al-shabaab uu yahay mid qasan, taasoo ay sababeen kooxo beeleedyo doonaya inay halkaas ka sameystaan maamullo iyaga u gaar ah.
“Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaan u dirnay halkaas si ay ula kulmaan madaxa beelaha si loo helo xiisadda halkaas ka jirta, waayo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ma doonayaan dagaal,” ayuu mar kale yiri madaxweyne Xasan Sheekh. Isagoo hadalkiisa ku daray. “Ma doonayno in dagaal uu ka dhaco Kismaayo, ciidammo uma dirayno Kismaayo mana u dirayno hub iyo saanado kale oo ciidan.”
Ugu dambeyn,wuxuu sheegay in sannado badan ay Kismaayo dagaallo ku soo jirtay, iyadoo lagu tartamayay gacan ku haynteeda, waayo waa magaalo khayraad badan leh.
Dhanka kale, madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya, William Ruto oo isna ka hadlay kulankii uu la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inay dani ugu jirto in labada dal (Soomaaliya iyo Kenya) ay sugaan amniga si ay dadku ay uga ganacsaddaan iyagoo aan wax baqdin ah ka qabin kooxo weerarro ku qaaddan.
“Ciidamada Kenya uma joogaan Soomaaliya howlo shaqo, balse markii ay dhacdo nabad la isku halleyn karo waa laga saarayaa,” ayuu hadalkiisa ku daray madaxweyne ku xigeenka Kenya Ruto.
Ruto wuxuu sheegay in Kenya ay walaac xooggan ka qabto weerarrada ay Al-shabaab kusoo qaadayso deegaannada dalxiiska loo tago ee dalka Kenya, isagoo sheegay in dalkiisu uu iska difaaci doono xoogagga Al-shabaab.
Hadalladan ayaa imaanaya iyadoo dhawana madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in ciidamada Kenya ee ku sugan Kismaayo ay si xun u dhaqmeen, kaddib markii ay diideen inay sugaan ammaanka wafdi ay dowladdu dirtay magaaladaas.